Uchwepheshe we-Semalt Uchaza ukuthi amaBots azalwa kanjani kusuka kugaxekile
UMichael Brown, iMenenja Yokuphumelela Kwemakhasimende Semalt Amasevisi Wezinhlelo Zedivayisi, uye wafaka ngokulingana nalesi sihloko amanye amaqiniso acindezelayo ngokusuka kogaxekile.
Umlayezo wokuqala wokugaxekile uthunyelwe ngo-1994. Ngaleso sikhathi, u-Laurence Canter noMargaret Siegel babhala uhlelo olufake isikhangiso kumasevisi ezincwadi ze-lottery e-green card. Bathumele lo mlayezo kuwo wonke amalungu e-Usenet News Group, futhi kwakukhona amalungu angaphezu kwezinkulungwane eziyisithupha abamukele lo mlayezo.
Ngenxa yendlela eyingqayizivele umyalezo othunyelwe ngayo, amakhasimende we-Usenet ahlulekile ukuthola amakhophi aphindaphindiwe, futhi abasebenzisi babona amakhophi wemilayezo efanayo kuwo wonke amaqembu. Ngaleso sikhathi, ukusetshenziswa kwezebhizinisi kwe-intanethi nemithombo ye-intanethi kwakungavamile - iclear 16b cleaning. Futhi, ukufinyelela ku-Usenet kwakubiza kakhulu kunezinye. Abasebenzisi abaningi babe nomuzwa wokuthi imiyalezo ebonakala kwezohwebo yayingenalutho. Abazange bathathe isikhathi sabo kuphela kodwa futhi bebebiza izindleko eziningi kubasebenzisi.
Kamuva, isigameko sekhadi eliluhlaza sabanjwa wonke umuntu. U-Arnt Gulbrandsen wakhetha umqondo we-cancelbots, kamuva owafaniswa nokuqukethwe kwemiyalezo yemilayezo yogaxekile. Ngemuva kwalokho, ithunyelwe kumthumeli wokuqala ukuqinisekisa. I-Canter no-Siegel baphinde baphinde bawuphindaphindiwe. Abasebenzisi abakwazi ukuhlanganisa ugaxekile futhi bahlulekile ukukhansela imilayezo kuseva le-Usenet..Izinyathelo zokulwa nogaxekile nazo zithathwe, kodwa konke kuyize.
Kwakuyisiqalo nje se-spam yezohwebo kanye nogaxekile we-Usenet. Ngaphambi kuka-Ephreli 1994, uSedar Argic uphendule emininingwaneni yemilayezo ethi wayenqatshelwe uhlanga lwe-Armenia. Kubonakala sengathi kwakungeyona isinqumo esihlakaniphile, futhi kwakudingeka izinto ukuba zishintshwe yilo lonke.
Ifomu lokuqala logaxekile lwe-Usenet laliyimilayezo ethunyelwe kubasebenzisi abaningi kwi-intanethi. Ngakolunye uhlangothi, i-Cancelbots isebenza emilayezo efanayo futhi izama ukuqinisekisa umthombo wayo. Ekugcineni, sekufika isikhathi lapho abasebenzisi basebenzisa i-teknoloji ethuthukile bathola isixazululo kule nkinga. Usosayensi waseRussia u-Andrey Markov wasungula i-bot ngo-1913 futhi wasebenzisa amakhasi ahlukahlukene ukuze akhiphe izihlungi.
Kwathatha isikhathi sokuthi abakwa-spammers baqonde ukuthi ama-cancelbots ahlaselwa ngokufaka ama-junks okungahleliwe ekugcineni kwawo wonke umlayezo. Ngaleso sikhathi, abakwa-spammers bahambisa i-Usenet ema-imeyili ahlukahlukene, ukuqinisekisa ukuthi behlasela wonke ama-imeyili e-imeyili aseYurophu naseMelika. Abantu abaningi kakhulu bazinikezele ekuhloleni uhlobo logaxekile futhi bazama ukulwa nabagaxekile ku-intanethi. Ama-akhawunti angewona abantu awenziwe ngenhloso yokucwaninga ukuziphatha kwabaduni kwi-intanethi. Ubuchwepheshe obusha basungulwa, futhi abagaxekile abahlukahlukene babhujiswa ngamaseva abo. Ngakolunye uhlangothi, abakwa-spammers baqaphela inkinga futhi bathuthukisa ubuchwepheshe obungcono kakhulu kunalokhu. Futhi zenze izindlela zokulwa nezihlungi ze-Google Analytics.
Ku-spammers, i-Bayesian idala imilayezo ukuze iqinisekise abasebenzisi ukuthi bayasemthethweni futhi banokwethenjelwa. Imicu emide neyifushane yamazwi angathintana nawo adalwe, futhi le nqubo yavame futhi yanda njalo.
Ngo-2010, ama-Amazon athuthukisa isitolo se-eBook ku-intanethi, futhi iseva yayo igcwele izigaxekile. Kuze kube manje, amasu amaningi kangaka asetshenziselwe ukubhekana nenani elikhulu labagaxekile nabaduni ku-intanethi.